Fiteny lojban - Wikipedia
Ny fiteny lojban dia fiteny noforonina. Mifototra amina endrika lojika ny fitsipi-pitenenana ka izay no antony iantsoana an'io fiteny io hoe "lojban"
Nantomboky ny fikambanana Logical Language Group tamin'ny 1987 ny fanamboarana sy ny fananganana io fiteny io mba hanatanteraka ny tanjon'ny fiteny loglan. Taorian'ny fotoan'ny nanaovana ny adihevitra sy ny fanandramana, natsangana tamin'ny taona 1998 ny fototry ny fiteny lojban ao amin'ny The Complete Lojban Language.
Ny teny hoe "lojban" dia avy amin'ny fanafohezana ara-baninteny ny teny hoe logji sy ny hoe bangy azo adika hoe "lôjika" sy "fiteny". Saingy manakona ny tena tanjon'ilay fiteny io teny anononana azy: tsy ferana amin'ny fampiasana amin'ny taranja lojika na informatika fotsiny ny fiteny lojban ary azo ampiasain'ny olombelona tsara izy amin'ny fifandraisana sy amin'ny fiainana andavanandro. Na dia ahafahana mampiady hevitra anisan'ny "abstrait" indrindra aza ny fiteny lojban, tsy misy fiteny manana "flexibilité" mitovy amin'ny fiteny lojban. Mety manakaiky na tsia ny fiteny natoraly, fiteny fibaikoana milina na fiteny iray fantatra ny fiteny lojban araka ny ambaratonga "abstraction" tadiavin'ny mpiteny.
Ny loharano ahitana ny voambolana miasa amin'ny fiteny lojban tamin'ny voalohany dia anisan'ny fiteny enina be mpiteny indrindra: ny fiteny anglisy, ny fiteny sinoa, ny fiteny arabo, ny fiteny rosiana, mba tsy ho lavitra loatra amin'ireo teny ampiasain'ny fiteny natoraly ny teny ampiasainy. Amin'ny firafiny, manana tondro iraisana amin'ny fiteny laadan sy ny fiteny esperanto ary koa ny fiteny toki pona ny lojban.
Wikipedia amin'ny teny Lojban
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_lojban&oldid=979508"
Dernière modification le 11 Janoary 2020, à 15:06
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2020 amin'ny 15:06 ity pejy ity.